Rajesh Koirala » Blog Archive » देखेपछि माया मोह
यस वर्ष जून २५ मा वनभोज भनिएको थियो । मौसमको पूर्वानुमानले पानी पर्छ भनेपछि जून २६ मा सारियो । शुरू भनेको त १० बजे बिहानै थियो ।
न्यु ह्याम्सरको चाइचेस्टर ४९ लेन रोड पुग्दा हलले क्यारम बोर्ड, ब्याडमिन्टन खेल्ने कोर्ट तयार थियो । टेबुल-कुर्सी ठाउँठाउँमा थिए । एउटा अस्थायी शौचालय बारीको छेउमा बनाइएको थियो । शौचालय भोलीपल्ट आएर फोहर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले लैजाने रहेछ । श्रीमती केट हल र उनका छोरा जनाथन भने यता आउन चाहनेहरुलाई ल्याउन गएका रहेछन् । म र ज्वाईं (सतन आचार्य) पहिला भयौं, त्यहाँ पुग्ने । ‘खोई त अरु?’ भन्ने प्रश्नमा ‘नेपाली-टाइम’ को प्रसंग उठेको थियो । वास्तविकता भने फरक थियो । वनभोजमा बोलाइएका धेरै नेपालीभाषीहरु ‘विकेन्ड’ (शनिबार र आइतबार) मा काम गर्छन् भन्ने थाहा भयो ।
हामीपछि आएका भाईहरुले हललाई भलिबल कोर्ट बनाउन सघाए । माइक सिस्टम बनाएका हलले ल्यापटपबाट गीत बजाउने तयारी गरेका रहेछन् । एकछिनमा एकजना ‘डिजे’ पनि आए ।
वनभोजमा ‘पट-लक‘ गर्ने भनिएको थियो । सबैले सक्दो-पुग्दो खाना बनाएर ल्याउने र समूहमा खाने चलनलाई ‘पट-लक’ भनिन्छ । नेपाली खाना पकाएर ल्याउने अनि भात र केहि थप तरकारी पकाउन हलकै भान्सा प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । त्यसै पनि गरियो ।
बीचको समयमा मान्छे आउने क्रम जारी रह्यो । गफ गर्ने मौका मिल्यो । शुरू-शुरूमा पुनर्स्थापित भूटानी शरणार्थी भीमलाल आचार्यले भोगेका घटनाहरुले सुनाए ।
वनभोजमा नाच्न र गाउन शुरु गर्नुअघि भिडियो र स्टिल क्यामरा लिएर तयार जुलिया फ्रिमन वुलपर्टले सोधिन्, ‘कसैलाई आफ्नो नृत्य वा गायनको तस्बिर वा भिडियो नखिचियोस् जस्तो लाग्छ भन्ने छ भने मलाई भन्नुहोला ।’ कसैको स्विकृतिबिना फोटो वा भिडियो खिच्नु हुन्न- यो अरुको अधिकारको सम्मान हो । (सिक्नुपर्ने कुरा ।)
स्कूले-उमेरका नानीहरु : मुना, वसन्ता, राधा, सुनिता, सपना, रविना, हेमन्ता, गायत्रा आदिले ‘नरिसाउनु मितिनी ज्यू, खुट्टैमा गर्दिन्छु जिउ-जिउ’, ‘ए, आमा सानिमा——-’, ‘हरिया चुरा मेरा हातभरि —-’, ‘किन मन हुन्छ चञ्चल — ‘ जस्ता गीतमा नाचे । आशिष (आशिक) निकै राम्रो गाउँदा रहेछन्, उनको गीत थियो, ‘प्रियशी, तिम्रो यादले सताउँछ मलाई —-’ । भीमलालकै छोरी मीना ढकालले भूटानी भाषा (जोङ्खा) र नेपाली गीत गाइन ।
बाहिरको तापमान ७३ फहरेनहाइट थियो । रूखको छहारी खोज्नु पर्ने भा’थ्यो । बारी हरियो पार्न पानी फ्याँक्ने ‘स्प्रिङ्कल’ मा साना-नानीहरु भिज्न जान्थे । चिसो हुन्थ्यो र भाग्थे । निकै रमाइलो लाग्थ्यो ।
हलका ४-५ परिवार साथीबाहेक धेरैजसो नेपालीभाषी भूटानी उपस्थित यो वनभोजको खानाले पनि धेरैलाई तानेको थियो । खिर, ढकने, पकौडा दाल, भात, तरकारी, अचार, मासु जस्ता हाम्रो जीब्रोले चिनेका खाना त थियो नै । साथमा यताको चिसोपेयको चलन पनि प्रभावी थियो । बच्चाहरु अन्नभन्दा सन्नमा बढी आकर्षित थिए ।
हल नेपाल रहँदा सँगै काम गरेका पिटर क्रसको थापाथली बसाइ र उनका अनुभव सुन्ने मौका मिल्यो, भात खाने समयमा ।
हामी अघिल्लो दिन अबेरसम्म बसेका थियौं । निद्रा लाग्ला जस्तो पनि भो । भन्छन् नि, भाते निद्रा । सबैभन्दा पहिला पुगेका हामीले १ बजेपछि निस्कने निर्णय ग-यौं । सालीको बिहे सकेर क्यानडाबाट फर्केर हतार-हतार सपरिवार वनभोजमा पुग्दै थिए, भूट्नीज कम्युनिटी अफ न्यु ह्याम्सरका निर्देशक टिका आचार्य । आचार्यभन्दा दुई पाइलाअघि नरपति पौडेल हुनुहुन्थ्यो । ४ बजेसम्म चल्ने वनभोजलाई हामीले करिब आधामा छाडेका थियौं, यसपटकलाई ।
‘अक्षरिका‘ न्युजलेटरले डग हलसँग जोडेको सम्बन्ध पनि हलको नेपालीमाथिको माया-मोह जस्तो भएको छ । हामी पनि हल र उनको परिवारबाट टाढा रहन सक्ने नभएका छौं ।
Julia Freeman-Woolpert says... on 29-06-2011
Photos from the party. We have some video too.
subash Acharya says... on 02-07-2011
Rajeshji this article is beautified to the interest of readers explaining the reality of the day. In fact, Dough Hall ,atrue friend of Nepali speaking people should always be recognized.
Desh Sonyok says... on 04-09-2011
Glad to read about banbhoj organized in alien land by Doublas!!!
Nicole Jamesasays... on 08-01-2012
In fact, most of the interest in his work comes from abroad or from South Koreans who have lived overseas.